Crime Against Children | PARDAFAS
Archive for the ‘Crime Against Children’ Category
Posted: January 12, 2018 in CIB, Crime Against Children, Metro Crime, police, PRIVATE, Security, Sex Scandal
वरिष्ठ पत्रकार किशाेर श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा राखेकाे तस्बिर
काठमाडौं– यौनका लागि नेपाली युवती पाइन्छ भन्दै भारतमा सार्वजनिक बिज्ञापन गरिएको तस्बिर फेला परेको छ । सामाजिक सञ्जालमा रहेको उक्त तस्बिरमा भारतका सबै प्रदेशमा मोजमस्ती तथा यौन सम्पर्कका लागि एक महिलाको नाम र नम्बर समेत उपलब्ध गराइएको छ । जसमा भनिएको छ ‘हामीसँग बंगलादेशी र नेपाली युवतीहरु उपलब्ध छन’ ।
सामाजिक सञ्जालमा सो तस्बिर राख्दै नेपाल प्रेस काउन्सीलका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठले भनेका छन – दिल्लीस्थित दूतावासमा बस्ने साथीहरु के गर्दै र हेर्दै दिन कटाउनुहुन्छ ? मौजमस्ती और सेक्स मार्केट खुलेर नेपाली लड्की उपलब्ध हुने बिज्ञापन यसरी हाकाहाकी निक्लँदा देशको हुर्मत लिइँदा खोजवीन,छानबिन,कार्वाही हुनुपर्दैन ?
केही युवतीहरुको तस्बिर समेत राखिएको उक्त पोस्टरमा यसरी देशको नाम जोडेर प्रचारप्रसार गरिनु दण्डनिय अन्र्तदेशिय अपराध मान्निछ ।
पत्रकार श्रेष्ठकाे पाेस्टपछि दिल्लीस्थित नेपाली दुतावासका राजनीतिक कन्सुलर हरी अाेडारीले पत्र लेख्दै घटनाका बिषयमा दिल्ली प्रहरीलार्इ घटनाका बिषयमा जानकारी गराएकाे बताएका छन । अाेडारीले लेखेका छन ‘बिषयकाे जानकारीका लागि धन्यबाद, यस सम्बन्धमा हामीले दिल्ली प्रहरीलार्इ हेर्न भनेका छाैं’, ।
टिकापुर घटनाको वास्तविकता के हो, जनता जान्न चाहन्छन
Posted: January 6, 2018 in Crime Against Children, police, Security
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्काे कार्यलयमा अन्सारीले बुझाएकाे पत्र । अन्सारीकाे पत्र बुझ्दै कार्यलयका सूचना अधिकारी चिरन्जीवी पाैडेल ।
काठमाडौं– सरकारले टिकापुर सहित तराई–मधेशमा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? आयोगको जाँचबुझमा को दोषी भेटियो ? आखिर आयोगले के सुझाएको छ सरकारलाई । यी बिषय जनताले जान्न पाउने कि नपाउने ? किन गोप्य राखियो आयोगले बुझाएको सातसय पेज लामो प्रतिवेदन ?
तर चिन्ता नलिनुहोस, प्राे लका अधिवक्ता तथा सूचनाको हकका लागि लडदै आएका एकजना अभियन्ताले संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोगगर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसँग आयोगको प्रतिवेदन माग गरेका छन । अभियन्ता सर्फुल्लाह अन्सारीले गत बुधबार सूचना मागगर्दै कार्यालयका सूचना अधिकारी चिरन्जीबि पौडेललाई पत्र बुझाएका हुन ।
अन्सारीले सप्तरीको भारदह,राजबिराज, महोत्तरीको जलेश्वर, धनुषाको जनकपुर, सर्लाहीको नवलपुर, रौतहट, बारा पर्सा, मोरङको रंगेली, रुपन्देही र बिशेषगरि कैलालीको टिकापुरमा भएका घटनाका सम्बन्धमा आयोगको प्रतिवेदनले औल्याएको निचोड माग गरेका हुन ।
‘घटना जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारका बिषय थिए, यसका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदन जनताले पढन पाउनु पर्छ, प्रतिवेदन अनुसार भए नभएको जान्न पाउने अधिकारको सुनिश्चतताका लागि निवेदन दिएको हु,’ अन्सारीले पर्दाफाससँग भने । उनले कार्यालय प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सकारात्मक रहेको बताए ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन गत साता बुझेकाे हो । सामुदायिक संस्था सानो पाइलाले समेत यसप्रकारका प्रतिवेदनले सुझाएका सुझाव, कारवाहीको सिफारीस र आवश्यक अनुसारका संरचना नबन्दा घटनाको पूनरावृत्ती भै रहेको भन्दै सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
‘यस्ता प्रतिवेदन स्वयम सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा नागरिकले सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारको प्रयोगगर्दै माग गर्नु बिडम्बना हो’ सानो पाइलाका संस्थापक कञ्चन झाले पर्दाफाससँग भने ।
आयोगमा नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआइजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अवकाशप्राप्त डिआइजी सुखचन्द्र झा, पूर्व नायब महान्यायधिवक्ता सूर्य कोइराला र कानुन व्यवसायी सुरज लोप्चन सदस्य थिए। गृह मन्त्रालयका शान्ति सुुरक्षा महाशाखाका सहसचिवले आयोगको सदस्यसचिवका रुपमा काम गरेका थिए।
बुढानिलकण्ठ चर्चमा बलात्कार प्रकरण : प्रहरीले खुलाएको वारदात स्थलमा घटना नै नभएको खुलासा, स्थानिय समेत अचम्म(भिडियाे)
Posted: November 27, 2017 in Crime Against Children, Metro Crime, police, PRIVATE, Security, Sex Scandal
प्रहरीले भनेकाे घटनास्थल शाैचालय र चर्च रहेकाे बुढानिलकण्ठस्थित घर ।
काठमाडौं– प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाउने नियमित बुलेटिनको आइतबारको अंकमा जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ शिर्षकमा एउटा समाचार थियो । घटना अति सम्बेदनशील र एउटा धार्मिक सम्प्रदायको आस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको बिषय थियो । पछि सोही समाचार प्रहरी प्रधान कार्यालयको आधिकारीक वेबपेजमा समेत राखियो ।
समाचार एकपछि अर्को गरि भाइरल हुन थालेपछि पर्दाफासले महानगरीय प्रहरी प्रमुख जयबहादुर चन्दसँग बुझ्दा घटना भएको पुष्टी भयो । र हामीले समाचार लेख्यौं । तर समाचारको गहिराईमा पुग्न हाम्रो टोली घटनास्थल पुग्दा केही आशंका उत्पन्न भए ।
पर्दाफासको टिमले स्थानीय प्रहरी र घटनास्थल वरपर रहेका ब्यक्तिहरुसँग सोध्दा उनीहरुले प्रहरीले भनिरहेको वारदात स्थल नै गलत भएको बताए । घटनास्थल भनिएको शौचालयमा चाबी लगाएको हुने र उक्त चाबी होटल संचालकसँग रहने गरेको छ । वारदातका दिन होटलमा भिड भएको बताउदै होटल संचालकले चाबी नै नदिई कसरी घटना भयो अनभिज्ञता ब्यक्त गरेकी छन । उनले चर्चसँग नजाेडिएकाे घटनामा समेत गलत प्रचार गरिएकाेमा अचम्म् मानिन।
घटनास्थल भनिएको चर्च दोस्रो तलामा रहेको छ । शनिबार चर्चमा प्रार्थना गर्न आउनेको घुइँचो रहेको थियो । प्रहरीले पीडित भनिएकी युवती समेत आमाबाबुसँग चर्च आएकी थिइन । आरोपी सोही चर्चको भुइतलामा रहेको शेबारो होटलमा प्राय आउनेजाने गरिरहन्थे । घटनाका दिन पनि आएका उनले दुई गिलास रक्सी पिएर निस्किएका थिए ।
तर एक्कासी उनलाई युवती उपर हातपात र जर्वजस्ती करणी आरोपमा पक्राउ गरिएको छ । नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार युवतीको बयानका आधारमा आरोपीलाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मेबारी र अधिकार नेपाल प्रहरीलाई छ । तर बयानमा भनेको घटनास्थलका बिषयमा प्रहरी र स्थानियको बयान फरक–फरक हुनाले घटना शंकाको घेरामा परेको हो ।
यस्तो थियो आइतबारको प्रहरी बुलेटिन
जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ :
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–८ हात्तीगौंडास्थित चर्चमा जाने क्रममा पासीकोट बस्ने गोरखाकी १६ वर्षीया युवतीलाई शनिबार सोही चर्चको ट्वाइलेटमा हातपात तथा जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा सोही नगरपालिका–८ भंगाल बस्ने नुवाकोटको थोपरेक–२ का २२ वर्षीय परिक्षण बिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अवतारी रिम्पोछेको यौन अवतार, फेसबुक पेजमै अश्लिल तस्बिर (Exclusive भिडियाे)
Posted: November 23, 2017 in CIB, Crime Against Children, Sex Scandal
Tags: CIB, Dig Pushkar Karki, HIS HOLINESS GURU REMBORCHHE CHULTHIM DORJE YONTAN TULKU LHAMA REMBORCHHE
काठमाडौं– काठमाडौंको दक्षिणकाली वोशनमा १२ रोपनीमा फैलिएको बिशाल र आलिशान गुम्बा छ । पेमा टासी छुलिठम घोम्बो कासुङ गुम्बाको नाम हो । त्यो आलिशानमा स्वघोषित भगवान रिम्पोछे छुल्ठिम दोर्जे योन्तान टुल्कु लामा बस्छन । उनको आधिकारीक वेब साइटमा उनलाई हिज होलिनेश गुरु भनिएको छ ।
उनको पहिरन, भेषभुषा र बोलीचालीले उनी बुद्ध धर्मका अनुयायी अवतारी नै भएजस्तो देखिए पनि उनको असली अवतार बिहीबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी) ले सार्वजनिक गरेको छ । आफुलाई अवतारी बताउने टुल्कु लामा यौन अवतारी ढोगी रिम्पोछे रहेछन । उनले आफ्नै गुम्बा कमिटीमा रहेकी एकजना महिलासँगका अश्लिल तस्बिर आफ्नै फेसबुक पेजमा राखेका छन ।
ब्युरोले उपचार गर्न आउने महिलाहरूलाई विश्वासमा पारि डरत्रास तथा अनुचित प्रभावमा पारी यौन शोषण गर्ने गरेको आरोपमा बुधबार पक्राउ गरेर जर्वजस्ती करणी र साइबर ऐन अनुसार कारवाही थालेपछि रिम्पोछेको यौन अवतार बाहिर आएको हो ।
ब्युरोका अनुसार रिम्पाछे टुल्कु लामाले आफु अवतारी लामा भएको दशौं पुस्ता सम्म एउटै कुलमा जन्मेको जन्मजात अवतारी लामा भएको भन्ने स्वघोषणा गरेको जनाएको छ । उनको वेब साइटमा समेत उनलाई भगवानको अवतारका रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । धर्मकै नाममा सन २००७ मा जापान समेत गएका लामाको गुम्बा कमिटीमा अधिकांस महिला रहेका छन । उनले ती महिलासँग टासिएर त कसैलाई चुम्बन गरेका तस्बिर आफ्नै फेसबुक पेजमा राखेका छन। उनको अक्टोबर ९ मा महिलालाई चुम्बन र आलिंगन गरेको तस्बिर राखेका हुन ।
ब्युरोका प्रमुख डिआइजी पुष्कर कार्कीले उपचारका नाममा यौनजन्य क्रियाकलाप गर्ने र धम्काउने धर्मगुरुलाई पक्राउ गरिएको बताए ।
ब्युरोका अनुसन्धानमा रिम्पोछे टुल्कुले १० बर्ष देखी दक्षिणकाली नगरपालिका चाल्नाखेल वोशन स्थित पेमा टासी छुल्ठिम घोम्बो कासुङ गुम्बा संञ्चालन गरी बसेका हुन । गुम्बामा महिलाहरूको संख्या धेरै रहेको छ। उनले उपचार गराउन आएका महिलाहरूलाई उपचारको क्रममा एक्लोकोठामा निर्वष्त्र गराई जवरजस्ती शरिरीक सम्बन्ध राख्ने गरेका थिए । पिडित महिलाहरूलाई सो कुरा कसैलाई भनेको खण्डमा ठुलो क्षती हुने पुन रोग बल्झिने र रोगको उपचारको निम्ती आफैसँग यौन सम्पर्क राख्नु पर्ने बताउदै आएका थिए ।
उनले गुरू तेतिस कोटी देउताको अवतार भएको, गुरू रिसाएमा अनिस्ठ हूने भनी डर त्रास देखाई भ्रममा पार्ने गरेका थिए । यतिसम्म की पिडित महिलाहरूलाई परपुरूष संग विवाह गरेमा मृत्यु समेत हुन्छ भनी त्रस देखाई पिडितहरूलाई बारम्बार यौन सम्पर्क गर्ने गरेका थिए ।
ब्युरोले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जवर्जस्ती करणी तथा बिधुतीय कारोवार ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा पाँच दिनको म्याद लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।